Itoobiya oo looga digay cawaaqibka xidhxidhidda mucaaradka - BBC News Somali
Itoobiya oo looga digay cawaaqibka xidhxidhidda mucaaradka
Booliska rabshadaha ka hor taga ee Itoobiya iyo shacab mudaharaadaya
Ururka dunida sumacadda ku leh ee u dooda xuquuqda aadanaha, Amnesty International aya sheegay in ugu yraan 75 qof oo taageerayaasha ururka Oromo Liberation Front (OLF) ah lagu xidhay Itoobiya, iyada oo ay sii xoogaysanayso gacanta adage e lagu hayo dadka qaba aragtida siyaasadeed ee mucaaradka ah doorashooyinka guud ee dalkaas ka dhici doona ka hor.
"Soo noqoshada xadhigga tirada badan ee dadka u ololeeya mucaaradka iyo taageerayaashooduba waa astaan walaac abuuraysa oo Itoobiya ka jirta" ayaa lagu sheegay warbixinta Amnesty.
Qabqabashadaa baahsani waxay noqon kartaa halis wiiqi karta xorriyada ra'yiga iyo isku imaanshaha iyada oo ay doorashooyinkk 2020 soo dhaw yihiin" ayuu yidhi Deprose Muchena oo ah agaasimaha Bariga iyo Koonfurta Afrika ee Amnesty.
Bilowgii todobaadkan ayaa qabqabashadaasi ka dhacday gobolka Oromia oo dhan oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Finchawa iyo Shambu, ayay intaa ku dartay Amensty.
Dadka la xidhay waxaa ka mid ah gabadh siyaasadda u ololaysa oo la yidhaa Chaltu Takele. Booliska ayaa u daatay guria waalidkeed oo ku yaal Shambu shantii subaxnimo ee Axaddii oo xidhay, ayay tidhi hay'addu.
Gudida doorashooyinka Itoobiya ayaa u qorsheeyey 16 Ogost in ay noqo taariikhda ay dhici doonto doorashadu, taas oo noqonaysa tii ugu horraysay ee laga qabto dalka tan iyo intii Ra'isal Wasaare Abiy talada la wareegay bishii Abriil ee 2018.
Wuxu markii dambe ku guulaystay abaal marinta Nobel ee nabadda oo uu ku mutaystay dadaalkii uu ku soo af-jaray colaaddii dhextaalay dalka ay jaarka yihiin ee Eritrea, waxaana sidoo kale aad loogu amaanay in uu xayiraaddii saarnayn ka qaaday ururka OLF iyo ururro kale oo siyaasadeed iyo siidaynta kumanaan maxaabiis ah.
Ururka OLF waa quwad siyaasadeed oo culus oo ka jirta Oromiya, waxa aanay dawladihii hore ku shaabadeeyeen inuu yahay urur aragagixiso ah.
Bishii Ogost 2018 ayaa dowladda Itoobiya iyo ururka OLF ay heshiis nabadeed ku kala saxeexdeen magaalada Asmara ee caasimadda dalka deriska la ah ee Eritrea oo saldhig u ahayd jabhaddaasi.
Jabhadda ayaa bishii Julay ee isla sannadkaa ku dhawaaqday xabbad joojin kaddib muddo sanado ah oo ay dagaal ba'an kula jirtay dowladda Itoobiya.
OLF ayaa dooneysay in gobolka Oromia ee ay degto qoomiyadda ugu tirada badan dalkaa Itoobiya ee Oromo uu ka tashado aayahiisa.
Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa markii dambe isna ururkaa ka saaray liiska kooxaha argagixisada ah.
Muddo kooban ka dib, 15 Sebtember 2018 waxaa magaalada Addis Ababa gaadhay madaxda Jabhadda Oromada ee OLF.
Wafddigani ayaa waxaa hogaaminayay gudoomiyaha jabhaddaas oo muddo dheer dagaal kula jirta dowlada Itoobiya.
Wafdigga ayaa waxa ay isugu jireen golaha dhexe OLF iyo guddiga fulinta ee jabhadaasi.
Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ku soo dhaweeysay wasiir dowlaaha wasaarada arrimaha dibadda ee xukuumadda Itoobiya.
Gudoomiyaha jabhada xoreynta Oramia ee OLF Dawud Ibsa Ayana oo shir jaraa'id ku qabtay garoonka ayaa sheegay in dib u soo laabashadoo ay la xiriirto isbadalka siyaasadeed ee Itoobiya ka dhacay.
Waxaa uu intaa ku daray in waxyaabaha ku dhiirigaliyay islamarkana ay ku qanceen ay ka mid tahay xukuumadda uu hogaamiyo Dr Abey Ahmed ee dhalinyarada ka kooban islamarkana isbadal doonka ah.
Gudoomiyaha jabhada xoreynta Oramiya ee OLF Dawud Ibsa Ayana oo wax laga waydiiyay waxa uu qorshahooda yahay ayaa sheegay in ay galayaan halgan ku dhisan wadahadalo iyo in halgamayaashooda la xareeyo islamarkana la baro anshaxa dowladnimo.
3 Filim oo Shah Rukh Khan uu uga yaabiyay Bollywood-ka